Fanentanana momba ny SIDA amin’ny alàlan’ny lahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 9:40 GMT
Red Ribbon image by SibleyHunter
Hira amin'ny teny Frantsay nosoratan'i Deny Munka izay nahazo loka tamin'ny 2005 nandritra ny fifaninanana nokarakarain'ny Kaomity Nasionaly amin'ny Ady Amin'ny SIDA (CNLS) tany Kamerona ny Koumandjara. Miresaka mikasika ireo fitondrantena mampidi-doza, fepetra fisorohana ary mikasika ny mitovy anarana amin'ilay hira, zazavavy tratran'ny SIDA tamin'ny alalan'ny fandidina ara-pananahana fanao amin'ny vehivavy.
Any Arzantina, natomboka tamin'ny herintaona ny hetsi-panentanana nasionaly iray mba hampahafantarana ny fampiasana kapaoty eo anivon'ny zatovo. Averina indray amin'ity taona ity ilay hetsi-panentanana triki-triki bang-bang miaraka amin'ny dikany iray hafa, mikendry ny hanabezana ny tanora amin'ny fomba fifanarahana amin'ny fampiasana kapaoty. Ao amin'ity rakitsary ‘tany ambadiky ny sehatra’ manaraka ity, hazavain'ireo mpikarakara ny mahatonga ny lahatsariny ao amin'ny Fahitalavitra ho toy ny làlana mitondra ny tanora ho any amin'ny tranonkalany, izay ahafahan'izy ireo mahazo fanazavana bebe kokoa mikasika ny fisorohana, fanandramana ary hafa. Miaraka amin'ny teny faneva vaovaon'izy ireo ”Raha tsy hanatsofoka ianao dia izaho no hanatsofoka azy aminao”, nanokatra ny lalana ho an'ny andiana lahatsary miresaka ny fomba hampidirana ny kapaoty ao amin'ny lalao ara-pananahana amin'ny fampiasana kapaoty misy hanitra, toetrany manokana, miloko, ary ny fomba hisintinana ny samy mpandray anjara hankamin'ny fampiasana ny kapaoty, ary ny fomba fampidirana izany amin'ny alalan'ny vava aza, mba hiarovana ny tenany amin'ny areti-mifindra izay ahitana ny VIH/SIDA. Amin'ny teny Espaniola ireo lahatsary sy tranonkala.
Manandratra ny tenany ho toy ny lahatsary podcast voalohany pelaka sy mahaleotena ao Shina ny QAFBeijing ary ao amin'ity lahatsary mizara 5 ity, mampiseho tranga roa samihafa izy ireo: voalohany, miresaka amin'i Edwin Cameron ry zareo, mpitsara lehibe ao Afrika Atsimo, lehilahy pelaka tsy manafin-tena ary mitondra ny tsimokaretina VIH izay napetrak'i Nelson Mandela teo amin'ny toerana tamin'ny fomba manokana, izay milaza hoe:
Mbola izaho irery ihany no olona tokana mitàna biraom-panjakana aty Afrika Atsimo, izay nofidiana mba hanambaràna ampahibemaso ny satako mitondra ny VIH, toa nahatsapa fa nantsoina hijoro vavolombelona aho. Nahatsapa ho voaantso mba hitatitra mikasika ny naha-tafavoaka velona ahy tao anaty firenena iray izay mahafaty olona an'arivony maro noho ny antony tsy misy dikany. Tsy nahatsiaro ho afaka na tokony hangina aho…
Mampiseho ny tantaran'i Xiaozhou ihany koa izy ireo, lehilahy pelaka iray mipetraka ao Shina izay mizara ny fomba nahitany ny satany miaraka amin'ny VIH, ny fomba niatrehany izany ary inona avy ireo zavatra andrasany sy antenainy ho amin'ny hoavy. Sady voadika amin'ny teny Sinoa no amin'ny teny Anglisy ilay lahatsary, miaraka amin'ny feo samy amin'ireo fiteny roa:
Manaraka ny ampahany voalohany amin'ilay lahatsary ary afaka mijery ny ampahany faha-2, ampahany faha-3, ampahany faha-4 ary ampahany faha-5 amin'ny fanarahana ilay rohy teo aloha ianao.